Indlela Yokubhalisa - Isikole Sezilimi Ephakathi, i-Cambridge
Qedela Ifomu lokubhalisa ku-intanethi futhi isicelo sakho sizothunyelwa esikoleni OR thwebula bese ugcwalisa ifomu futhi uyithumele kithi nge-imeyili, ukuthumela noma ukuyiyisa kumuntu ku-Office Office.
Khokha idiphozi (inkambo kanye nemali yokuhlala yeviki le-1 kanye nemali yokubhuka yokuhlala) futhi sizobheka inkambo yakho futhi sihlele indawo yokuhlala.
Sizoqinisekisa inkambo yakho nokuhlala lapho sithola idiphozi yakho futhi sikuthumelele incwadi ye-Acceptance. Abafundi abangewona i-EU bayodinga lesi sitifiketi ukuthola i-Visa Yabafundi base-UK. Ukwaziswa okwengeziwe kungatholakala ku Ikhasi Lolwazi lwe-Visa.
Konke ukukhansela kufanele kubhalwe phansi.
Uma ukhansela amasonto amabili noma ngaphezulu ngaphambi kokuthi kuqalwe inkambo, sizobuyisela zonke izimali ngaphandle kwamadiphozi.
Uma ukhansela ngaphansi kwamasonto amabili ngaphambi kokuthi kuqalwe inkambo sizobuyela ku-50% yazo zonke izimali.
Uma isicelo sakho se-Visa Student yase-UK siphumelelanga sizobuyisela zonke izimali ngaphandle kwesikhwama kanye nokuhlala kwezindlu, lapho sithola isaziso se-Visa Refusal.
Asibuyiseli imali uma ukhansela ngemuva kokuqala kwenkambo.
Sicela uye 'Khokha imali noma ukhokhe'